ခင်မင်လေးစားရပါသော စေတနာရှင်များနှင့် မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို "မင်္ဂလာပါ" လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်...
ကုသိုလ်အဖွဲ့နှင့် Lotus Foundation တို့၏ (၇ )နှစ်မြောက် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၄/၁၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ပထမဆုံး အသိပေးလိုတာကတော့ ၂၀၁၃/၁၄ ပညာသင်နှစ် အတွက် သူငယ်တန်းမှ ၉တန်းအထိ အောင်စာရင်းများ ထွက်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ၁၀တန်းအောင်စာရင်းများကို စောင့်ဆိုင်းဆဲဖြစ်ပါသည်။ သူငယ်တန်းမှ ၉တန်း စုစုပေါင်းကျောင်းသား ၄၇၂ ဦးအနက်မှ ၁၅ ဦး ကျရှုံးခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏ စည်းကမ်းအရ ဒုတိယအကြိမ် ကျရှုံးသော ကျောင်းသား/သူများကို ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း ရပ်ဆိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့မှုကို လက်ခံရရှိသော ကျောင်းသားများသည် တစ်နှစ်တတန်း ပုံမှန်အောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တစုံတခုကြောင့် ချွတ်ချော်ပြီး ပထမအကြိမ် ကျရှုံးသော ကျောင်းသားများကို အလှူရှင်မှလည်း သဘောတူပါက နောက်နှစ်တွက် ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများ နှင့် ၄င်းတို့၏ အုပ်ထိန်းသူများအား အဖွဲ့၏ စည်းကမ်းများကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားထားပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ် ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် အလှူငွေကောက်ခံမှုနှုန်းထားများကတော့ ယခင်နှစ်ကအတိုင်း
စာသင်နှစ် (၈)လကို (၂) လတစ်ကြိမ် (၄)ခါ ခွဲပြီး အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း မပြောင်းလဲဘဲ ကောက်ခံသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မူလတန်း - (၂) လအတွက် (S$ ၂၀)
အလယ်တန်း - (၂) လအတွက် (S$ ၃၀)
အထက်တန်း - (၂) လအတွက် (S$ ၄၀)
အလှူငွေကောက်မယ့်လတွေကတော့ မေလကုန်တစ်ကြိမ်၊ ဇူလိုင်လကုန်တစ်ကြိမ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တစ်ကြိမ်၊ နိုဝင်ဘာလကုန်တစ်ကြိမ်
ဆိုပြီး (၄)ခါ ခွဲပြီး ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ကြေး လှူဒါန်းလိုသူများအတွက် အလှူငွေများကို စတင်ကောက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွက် ပထမအကြိမ် ထောက်ပံကြေးကို ဇွန်လဆန်းပိုင်း မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး မြန်မာပြည်ဖက် လွှဲပြောင်းပေးဖို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
ယခုနှစ်တွင်လည်း ယခင်ပညာသင်နှစ်များ နည်းတူ exchange rate ကြောင့် ပိုထွက်လာသော အလှူငွေများနှင့် ထပ်ပေါင်းအလှူများအား စုပေါင်းပြီး ကျောင်းသား/သူ များကို ကျောင်းဝတ်စုံများ တဦးလျှင် ၃စုံစီ၊ စာရေးကိရိယာများ ဝေငှပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘိုကလေး မှ ထောက်ပံ့ထားသော
မူလတန်း ၁၁ ဦး
အလယ်တန်း ၄၁ ဦး
အထက်တန်း ၂၄ ဦး
စုစုပေါင်း ၇၆ ဦး အတွက် ကျောင်းဝတ်စုံ၂၂၈ စုံ အော်ဒါမှာ ထားပြီးကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
ရရှိအလှူငွေ စုစုပေါင်းအပေါ် မူတည်၍ ထောက်ပံ့ ပေးမည့် ကျောင်းများနှင့် အရေအတွက်ကို ထပ်မံ အသိပေး ကြေငြာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းဝတ်စုံများ အောက်ပါအတိုင်း လှူဒါန်းရန် သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။
မူလတန်း (ကျား) အတွက် - ရှပ် အကျီ င်္ နှင့် ဘောင်းဘီ ၃စုံ
မူလတန်း (မ) အတွက် - ဂါဝန် ၃ထည်
အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း(ကျား) အတွက် - ရှပ်အကျီ င်္နှင့် လုံခြည် ၃စုံ
အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း(မ) အတွက် - မိန်းကလေးဝတ် အကျီ င်္နှင့် လုံခြည် ၃စုံ
လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် ကလေးတဦးစီအတွက်သော်လည်းကောင်း မိမိဆန္ဒရှိသရွေ့သော်လည်းကောင်း အောက်ပါ နှုန်းထားများဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ကလေး တဦး (ကျောင်းဝတ်စုံ ၃စုံနှင့် စာရေးကိရိယာများ) - 15 SGD
ကျောင်းဝတ်စုံ တစုံ -3SGD
ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်-
*အဖွဲ့မှ လက်ကျန် အလှူငွေများနှင့် ထပ်မံရရှိသော အလှူငွေများ စုပေါင်း၍ လှူဒါန်းသွားပါမည်.. *
အဆင်မပြေမှု တစုံတရာ ရှိခဲ့ပါက နားလည်ပေးပါရန် နှင့် သိရှိ မေးမြန်းလိုသည်များကို အဖွဲ့ဝင်များထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းလည်း အသိပေးလိုပါသည်။ကူညီလှူဒါန်းပေးကြသော အလှူရှင်များ အားလုံးနှင့် တကွ အဖက်ဖက်မှ ပံ့ပိုးမှုများပေးသော စေတနာရှင်များ အားလုံးကို ကုသိုလ်အဖွဲ့ မှ ကျောင်းသား/သူလေးများကိုယ်စား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ လိုအပ်ချက်များ၊ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုများအတွက် အဆင်မပြေမှု အလိုမကျမှုများ ရှိခဲ့ပါက နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် နှင့် ပွင့်လင်းစွာ အကြံဥာဏ်များ ပေးလိုပါက အဖွဲ့မှ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ကြိုဆိုနေပါကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။
Labels: Kutho, Lotus Foundation
၂၀၁၃/၁၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ် စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည် ..
ကုသိုလ်အဖွဲ့နှင့် Lotus Foundation တို့၏ ၆နှစ်မြောက် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၃/၁၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ပထမဆုံး အသိပေးလိုတာကတော့ ၂၀၁၂/၁၃ ပညာသင်နှစ် အတွက် သူငယ်တန်းမှ ၉တန်းအထိ အောင်စာရင်းများ ထွက်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ၁၀တန်းအောင်စာရင်းများကို စောင့်ဆိုင်းဆဲဖြစ်ပါသည်။ သူငယ်တန်းမှ ၉တန်း စုစုပေါင်းကျောင်းသား ၄၄၈ ဦးအနက်မှ ၆ဦး ကျရှုံးခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏ စည်းကမ်းအရ ဒုတိယအကြိမ် ကျရှုံးသော ကျောင်းသား/သူများကို ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း ရပ်ဆိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့မှုကို လက်ခံရရှိသော ကျောင်းသားများသည် တစ်နှစ်တတန်း ပုံမှန်အောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တစုံတခုကြောင့် ချွတ်ချော်ပြီး ပထမအကြိမ် ကျရှုံးသော ကျောင်းသားများကို အလှူရှင်မှလည်း သဘောတူပါက နောက်နှစ်တွက် ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများ နှင့် ၄င်းတို့၏ အုပ်ထိန်းသူများအား အဖွဲ့၏ စည်းကမ်းများကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားထားပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ် ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် အလှူငွေကောက်ခံမှုနှုန်းထားများကတော့ ယခင်နှစ်ကအတိုင်း စာသင်နှစ် (၈)လကို (၂) လတစ်ကြိမ် (၄)ခါ ခွဲပြီး အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း မပြောင်းလဲဘဲ ကောက်ခံသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူငွေကောက်မယ့်လတွေကတော့ မေလကုန်တစ်ကြိမ်၊ ဇူလိုင်လကုန်တစ်ကြိမ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တစ်ကြိမ်၊ နိုဝင်ဘာလကုန်တစ်ကြိမ် ဆိုပြီး (၄)ခါ ခွဲပြီး ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုသိုလ်အဖွဲ့ (စင်ကာပူ)မှ ပြုလုပ်နေကြဖြစ်သော appreciation letters ပေးအပ်ပွဲနှင့် နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးပွဲကို ယခုနှစ်အတွက် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ e-mail မှသာ appreciation letter (soft copy) များကို ပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် အဆင်မပြေမှု တစုံတရာ ရှိခဲ့ပါက နားလည်ပေးပါရန် နှင့် သိရှိ မေးမြန်းလိုသည်များကို အဖွဲ့ဝင်များထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းလည်း အသိပေးလိုပါသည်။
ကူညီလှူဒါန်းပေးကြသော အလှူရှင်များ အားလုံးနှင့် တကွ အဖက်ဖက်မှ ပံ့ပိုးမှုများပေးသော စေတနာရှင်များ အားလုံးကို ကုသိုလ်အဖွဲ့ မှ ကျောင်းသား/သူလေးများကိုယ်စား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ လိုအပ်ချက်များ၊ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုများအတွက် အဆင်မပြေမှု အလိုမကျမှုများ ရှိခဲ့ပါက နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် နှင့် ပွင့်လင်းစွာ အကြံဥာဏ်များ ပေးလိုပါက အဖွဲ့မှ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ကြိုဆိုနေပါကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။
Posted by မိုးခါး at 11:55 PM No comments:
မျောက်ချောကုန်း ပရဟိတကျောင်း ၁၇-၃-၂၀၁၃နေ့တွင် မီးဘေးသင့်ခဲ့ခြင်းအတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်း
Photo Credit to: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.345928812178664.1073741829.324164797688399&type=3
၁၇-၃-၂၀၁၃ရက်နေ့က မျောက်ချောကုန်း ပရဟိတကျောင်း မီးဘေးသင့်ခဲ့မှုအတွက် ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ အလှူငွေများ ကောက်ခံပေးလျှက် ရှိပါသည် .. အလှူငွေများကို ပထမအသုတ်အနေဖြင့် မတ်လကုန်တွင် မြန်အောင်ဘက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး အလှူရှင်များ ဆက်လက်လှူဒါန်းလိုပါက အလှူငွေများကို ထပ်မံကောက်ခံ၍ ဆက်လက် လှူဒါန်းပေးသွားမည် ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးလိုပါသည် ..
အလှူငွေ ကောက်ခံရရှိမှုစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ..
ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် မိသားစု 50 SGD
ကိုသီဟထွန်းခိုင်+မဝေေ၀လွင်အောင် 50 SGD
TK + CS 135 SGD
ကိုဇော်ရဲလွင် + မနန်းစီဖောင်း 110 SGD
ကိုစိုင်းဝင်းနိုင်လင်း + Diana Tiong 100 SGD
မခိုင်ဝေလွင်၊ မစောမြသန္တာဝင်း 150 SGD
ဦးစိုးမင်း + ဒေါ်ဖြူဖြူအေး 50 SGD
ကိုမျိုးကျော်ဆက် 50 SGD
ဦးချစ်သောင်း + ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန် 30 SGD
ကိုစော+မလဲ့ နှင့် သမီးလေး စမ်းရေ မိသားစု 50 SGD
နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာလူငယ်များအဖွဲ့ (OBYG Group) 300 SGD
ကိုတင်မောင်ဌေး+မနေခြည်မောင် 50 SGD
ကိုလှမင်းဇော်+မယဉ်ယဉ်ထိုက် 10 SGD
မမေသူခိုင် 10 SGD
မိုးခါး 30 SGD
ကိုတင်ဝင်းစိုး + မခင်သီရိ မိသားစု 30 SGD
မအေးစန္ဒာအောင် 20 SGD
မရွှေစင်သီရိထွန်း 50 SGD
မဖြူဖြူခိုင် 30 SGD
(***အလှူငွေ ရရှိမှုများကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည် ..***)
လက်ရှိမျောက်ချောကုန်းကျောင်းလေးရဲ့ အခြေအနေကို အောက်ပါလင့်တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် ..
ပါဝင်ကူညီမှုအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည် ..
ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်၍ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည် ..
ဒေါ်ဋ္ဌေးဋ္ဌေးအုန်း (ရင်သွေးဇုန်) 09- 420158570
ကိုကျော်စိုး (ကြယ်ငါးအဖွဲ့) 09-49272302
ကိုစော+မလဲ့ (ကုသိုလ်အဖွဲ့) – 90076836
ကိုဇွဲသာဝင်း (ကုသိုလ်အဖွဲ့) - 8112 3818
ကိုပြည့်ဖြိုးပိုင် (မြန်အောင်အသင်း) - 98806055
မဖြူဖြူခိုင် (ကုသိုလ်အဖွဲ့) - 91893514
မနေသူဝင်း (ကုသိုလ်အဖွဲ့) - 92351401
မခင်လတ်လတ်နိုင် (ကုသိုလ်အဖွဲ့) - 96225836
မိုးခါး (ကုသိုလ်အဖွဲ့) – 92393049
ကိုသောင်းထွဋ် (ကြယ်ငါးအဖွဲ့) 09-451242422
ကိုအေးကျော် (ကြယ်ငါးအဖွဲ့) 09-422451899
အောက်က လင့်တွေမှာလည်း မျောက်ချောကုန်းကျောင်းလေးအကြောင်း ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ် ..
Labels: ကြယ်ငါးကောက်သူများ, မျောက်ချောကုန်း
၂၀၁၂/၁၃ ပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်း တတိယအကြိမ် ခရီးစဉ်
Lotus အဖွဲ့နှင့် ကုသိုလ်အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ထောက်ပံ့စရိတ်များကို သွားရောက်ပေးပို့မည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုတခါ တတိယအကြိမ်မြောက် သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ..
DATE (1411/2012) & (15/11/2012)
TIME 14/11/2012 ရက်နေ.နံနက် ၇နာရီတွင် ဗဟန်းကျောင်းမှစတင်ထွက်ခွာမည်။
DATE (17/11/2012) & (18/11/2012 )
TIME (17/11/2012) ရက်နေ. နံနက် ၆ နာရီတွင်မော်တင်ဆိပ်.ကမ်းမှစတင်ထွက်ခွာပါမည်။
ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲ ခရီးစဉ်
DATE (2311/2012) & (24/11/2012)
TIME 23/11/2012 ရက်နေ.နံနက်၆နာရီ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်.ကမ်းမှ စတင်ထွက်ခွာပါမည်။
TIME မွန်းလွဲ (၁၂၃၀) နာရီ
စုရပ် လှည်းတန်း IT လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင်နှစ်အတွင်း သွားရောက်ခဲ့သော မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများနှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ကုသိုလ် Facebook page တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ..
Giving many helping hands
Labels: Kutho, Lotus Foundation, သတင်းစဉ်
မနေ့က (26-10-12) ကြယ်ငါးကောက်သူများအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပြီး သူငယ်ချင်း အစ်မ တယောက် သူ့မွေးနေ့မှာ ကလေးတွေအတွက် အာဟာရဒါနပြုချင်တဲ့အကြောင်း အကြောင်းကြားရင်း သတင်းမေးဖြစ်ပါတယ် .. အစ်မရဲ့ စိတ်ကူးက ကလေးတွေ စားနေကျထမင်းဟင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ဒံပေါက်လို ထောပတ်ထမင်းလိုမျိုး စားနေကျမဟုတ်တဲ့ အစာ ပြီးတော့ ရေခဲမုန့် ကိတ်မုန့်လေးပါကျွေးချင်တာပါ ..
မျောက်ချောကုန်းဆိုတဲ့နေရာလေးက ဟိုးအစပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ခက်ခက်ခဲခဲ ရပ်တည်ခဲ့ရပြီး ခုနေတော့ တော်တော်လေး ချောင်လည်ခဲ့ပြီလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ဖြည့်ဆည်းဖို့ ကွက်လပ်လေးတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိနေဆဲပါ ..
မိဝေးဖဝေး မပြည့်မစုံနဲ့ အသက်ရှင်သန်ရပ်တည်နေရတဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့ ကလေးတွေကို အလုပ်တာဝန်တွေကြားက ဖြစ်အောင် ကူညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တွေ များလာတာကလည်း အဆိုးထဲက အကောင်းတခုပါပဲ .. ခုလို ကူညီပေးနိုင်မယ့် အဖွဲ့စည်းတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်တာလည်း စေတနာ ထက်သန်စွာ လှူဒါန်းပေးနေကြတဲ့ အလှူရှင်များရဲ့ ကျေးဇူးပါပဲ .. အလှူရှင်များအားလုံးနဲ့ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ အားလပ်ချိန်တွေထဲက ဖဲ့ပြီး လိုက်လံကူညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ် ..
မနေ့က ကြယ်ငါးကောက်သူများအဖွဲ့ကို ကလေးတွေအတွက် အာဟာရဒါန လှူဒါန်းဖို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့ အောက်ပါအတိုင်း အကြောင်းပြန်လာပြီး ကလေးတွေအတွက် စီစဉ်ထားတဲ့ အခြား အစီစဉ်လေးတွေပါ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် .. ကိုယ်တိုင်တော့ ပြန်လာတဲ့ စာကို ဖတ်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးလာမိပါတယ် .. စာဖတ်သူတွေလည်း ဖတ်ကြည့်ပါဦး ..
မင်္ဂလာပါ မိုးခါး ရေ..
ဖေါ့ဘူးတွေနဲ့ သယ်သွားရင် ရလောက်တယ်..
မျောက်ချောကုန်းမှာ စောင့်ကျွေးနိုင်ပေမဲ့ .ကွင်းကလေးနဲ့ ပန်းညိုကွင်းမှာတော့
ဆရာတော်တွေကို ဘူးတွေအပ်နှံ ထားခဲ့ရမဲ့သဘောရှိပါတယ်..
မျောက်ချောကုန်းနဲ့က ၂ မိုင်လောက်ဝေးသေးတယ်လေ..
စီစဉ်တိုင်ပင်ကြည့်ပါဦးမယ် ..cost ပါမေးပြီးတွက်ပေးပါမယ် ..
ခုတင်မိုးခါးတို့ဆီ အကြောင်းကြား mail ပို့မလို့ .
ဒီနေ့ 27.10.12 မှာ ၃ ကျောင်းစလုံးက ကလေး ၈၅ ဦးကို မြန်အောင်
မနက် ၇ နာရီ ကားလေးစီးနဲ့ ကလေးတွေကို သွားခေါ်ပါမယ်..
ကြယ်ငါးအဖွဲ့ အပြင် မြို့နယ် မီးသတ်ဋ္ဌာနနဲ့ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ကပါ ကူညီကြပါမယ်..
တရုတ်ဘုံကျောင်းမှာ နားဘို့စီစဉ်ထားပါတယ်..ခနနား..ဘုရားပွဲကို ခြေလျှင်လျှောက်မယ်..
ဘုရားဖူးကံတော့ ..ပြီးရင် ရဟတ် နဲ့ ပျော့အိအိ ကစားကွင်းမှာ ကစားကြပါမယ်..
ကစားလို့ စီးလို့ပြီးရင် ဈေးတန်းလည်..၀ယ်ချင်တာရှိရင်ဝယ်..
နေ့လည်စာထမင်းကို ကြက်ဆီပြန်..အာလူးပဲဟင်းအချို.. ငါးပိကျော်နဲ့ကျွေးမယ်..
စားလို့ပီးရင် ဖိနပ် etc: လိုတာလေးတွေဝယ်ပေးပြီး.. မြို့ထဲကိုသွားမယ်..
နေခြည်ဈေးကိုဝင်ပြီး ဖိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေ ကိုလည်မယ် (ဆိုင်တွေက မုန့်
စာအုပ် etc: ဝေကြမယ်)..ဆိုင် ၂၀ လောက်ဖိတ်ထားကြတယ်..
ပြီးရင် ဆုတောင်းပြည်စေတီကိုသွားမယ်..ဘု ရားဖူးမယ်..ဧရာဝတီမြစ်ကိုပြမယ်..
ဘုရားမှာ ကျောက်ကျောရွှေရင်အေး စီစဉ်ထားပါတယ်..
ကြက်ခြေနီအဖွဲ့က ကျန်းမာရေးပညာပေးစကား ..ကြယ်ငါးအဖွဲ့က ပုံပြောတာမျိုးတွေလုပ်မယ်..
ခရစ်ရန်ဘုရားကျောင်း..ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက် စတဲ့ လမ်းတစ်ရှောက် ပြမယ် ရှင်းပြမယ်..
လမ်းဆုံမှာ ပန်းခြံကို ရောက်မယ်..လျှောစီးကြ ကစားခိုင်းမယ်...
ပီးချိန်မှာ ဟိနူအဖွဲ့က အအေးနဲ့ မုန့်လာကျွေးကြမယ်..
အပြန်တွက်ကားစီစဉ်ထာမယ်..ပန်းခြံကနေ မျောက်ချောကုန်းနဲ့ ၃ရွာစလုံး
မနက် ၅ နာရီကလူစစု မုန့်စားပြီးကြရင်..စကြမှာ..
ညနေ ၅ နာရီ ပြန်ပို့အပြီးလို့ မှန်းထားတယ်..
ကားတွေကိုလဲ သင့်ငွေပေးငှားတယ်..အားလုံးအားလုံးကို ကြက်ဝယ်တာကအစ
တန်ရာတန်ဘိုးနဲ့ပါ.. ရဟတ်အဖွဲ့က တ၀က်ပဲယူမယ်လို့ အကြောင်းပြန်ပါတယ်..
ည ၇ နာရီအထိတော့ လမ်းမပျက်သေးဘူးလို့ ရွာက ဖုန်းဆက်တယ်..
ဖတ်ရတာ ညောင်းသွားလောက်ပီထင်တယ် တူမရေ..
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကူးစက်ခံစားမိကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ..
မိုးခါးအတွက်ကတော့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိသလို သနားဂရုဏာပါ သက်မိပါတယ် .. လူချင်း အတူတူ ကလေးချင်း အတူတူ ဘ၀လေးတွေ ကွာခြားကြတယ် .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ကမိစုံဖစုံနဲ့ အချိန်ပြည့် ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ကလေးတွေလို မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့လေးတွေလည်း အုပ်ထိန်းသူတွေရဲ့ ရင်ငွေ့ စေတနာရှင် အလှူရှင်များရဲ့ မေတ္တာငွေ့မှာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ..
ဆက်လက်ပြီး ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများရရင် ထပ်မံ တင်ပြပေးပါ့မယ် ..
ကူညီပံ့ပေးမှုများ နှင့် အလှူရှင်များ၏ စေတနာ မေတ္တာများအား အစဉ် လေးစားကျေးဇူးတင်လျှက်
Posted by မိုးခါး at 9:17 PM No comments:
Labels: ကွင်းကလေး, ပန်းညိုကွင်း, ကြယ်ငါးကောက်သူများ, မျောက်ချောကုန်း
မျောက်ချောကုန်း၊ ကွင်းကလေး နှင့် ပန်းညိုကွင်း ပရဟိတ ကျောင်းများ
ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ ယခု လက်ရှိ ထောက်ပံ့ပေးနေသော ကျောင်းများကို အရှေ့က ပို့စ်တွင် ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် .. အခုတခါ ထပ်မံ ဝေမျှပေးလိုတာကတော့ ပရဟိတ ကျောင်းများဖြစ်တဲ့ မျောက်ချောကုန်း၊ ကွင်းကလေး နှင့် ပန်းညိုကွင်း အစရှိသော နေရာလေးများပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..
ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ မြန်အောင်မြို့ရှိ ကြယ်ငါးကောက်သူများ အဖွဲ့ နှင့် ဆက်သွယ်၍ ထိုနေရာများသို့ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ လမှ စတင်ပြီး တထောင့်တနေရာမှ ကူညီမှုများ စတင်ခဲ့ပါတယ် ..
ကုသိုလ်အဖွဲ့စတင်စဉ်က ပညာရေးကို ဦးစားပေးကူညီဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး ယခု ဖော်ပြပါ နေရာများကိုတော့ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု အပြင် ဘက်စုံ လိုအပ်ချက်များကိုပါ အလှူရှင်များနှင့် အလှူငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်၍ ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ..
မြန်အောက်ဘက်ရှိ ကြယ်ငါးကောက်သူများအဖွဲ့ နှင့် ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ ဖော်ပြပါနေရာများသို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများကတော့ -
- ကျောင်းတွင် ရှိသော ကလေးများအား အစားအစာနှင့် ပညာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများကူညီထောက်ပံ့ခြင်း
- ပြဌာန်းစာအုပ်များ ၀ယ်ယူထောက်ပံ့ခြင်း
- ထမင်းစားဆောင် မိုးမလုံခြင်းအတွက် ပြုပြင်ခြင်း
- ကလေးများ အိပ်ယာနေရာများအတွက် ဖယောင်းပုဆိုး ခင်းပေးခြင်း
- ကလေးများ ဖိနပ်ထားရန် ဖိနပ်အုတ်ခုံ ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ် ..
ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ ပေးပို့ လှူဒါန်းငွေများ အပြင် မြန်အောင်ရှိ ကြယ်ငါးကောက်သူများအဖွဲ့ဝင်များမှလည်း လစဉ် ထည့်ဝင်ငွေများ ထည့်ဝင်၍ ကျောင်းနှင့် ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် လိုအပ်သော ပြုပြင်မှုများ၊ ကလေးများအတွက် အစာအဟာရလှူဒါန်းခြင်းများ၊ ကျောင်းတက်ရန် မစွမ်းနိုင်တဲ့ နွမ်းပါးသော ကလေးငယ်များကို ကျောင်းထားပေး၍ အပတ်စဉ် ကျောင်းစရိတ် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ၊ ရာသီအလိုက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ထီး၊ ဖိနပ်၊ ထမင်းဗူး အစရှိသော ပစ္စည်းများအား ၀ယ်ယူထောက်ပံ့ခြင်း စသည်တို့ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးလျှက် ရှိပါသည် ..
ထိုကျောင်းကလေးများမှာ အတော်ပင် နွမ်းပါး၍ လိုအပ်ချက်များစွာလည်း ရှိနေပါသေးသည် .. လိုအပ်ချက်များကိုလည်း လက်ခံရရှိသော အလှူငွေများနှင့် သင့်လျှော်ညီမျှအောင် သုံးစွဲ၍ ရန်ပုံငွေ ပိုလျှံပါကလည်း ညနေပိုင်း မူလတန်းစာသင်ဝိုင်းများတွင် အာဟာရကျွေးခြင်းများ၊ ထူးချွန်ဆုပေးခြင်းများ စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည် ..
လက်ရှိ ကျောင်းသား/သူ စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ..
မျောက်ချောကုန်း ပရဟိတ ကျောင်းသား/သူ (၅၉) ဦး
ကွင်းကလေးကျောင်း ပရဟိတ ကျောင်းသား/သူ (၁၆) ဦး
ပန်းညိုကွင်းကျောင်း ပရဟိတ ကျောင်းသား/သူ (၁၀) ဦး တို့ ဖြစ်ပါသည် ..
ကြယ်ငါးကောက်သူများ အဖွဲ့ မြန်အောင်မြို့မှ ပေးပို့ပေးခဲ့သော ကျောင်းနှင့် ကလေးများ၏ အနေအထားများကို အောက်တွင် ပုံများဖြင့် ပြန်လည် ဝေမျှထားပါသည် ..
ယခု လက်ရှိအနေအထားအရ ထိုကျောင်းလေးများအတွက် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသေးတယ် .. ကလေးများကို အစာအဟာရ ကျွေးသည်မှစလို့ နေရာထိုင်ခင်းများ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများ အဆုံး လိုအပ်နေပါတယ် .. သို့ပါသောကြောင့် ထိုနေရာလေးများသို့ လှူဒါန်းလိုကြတယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း မြန်အောင်မြို့ရှိ ကြယ်ငါးကောက်သူများ အဖွဲ့သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း လှူဒါန်းနိုင်ကြပါတယ် ..
ကြယ်ငါးကောက်သူများ အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ..
စင်ကာပူနှင့် တခြားနိုင်ငံများမှ စိတ်ပါဝင်စား လှူဒါန်းလိုသူများ kutho.blog@gmail.com ကုသိုလ်အဖွဲ့သို့ တိုက်ရိုက် မေးဖြင့်ဆက်သွယ်၍ လှူဒါန်းပေးနိုင်ပါတယ် .. ကုသိုလ်အဖွဲ့ဘက်မှလည်း ထိုကျောင်းလေးများသို့ ထောက်ပံ့ပေးနေသော အလှူရှင် အင်အား နည်းပါးနေပါသေးတယ် ..
ယခုလ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ မှ စတင်ပြီး ကလေးများအတွက် စားစရိတ်ကို ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ လှူဒါန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် .. စားစရိတ်အတွက် မျောက်ချောကုန်း (၈၀၀၀၀) ကျပ် နှင့် ကွင်းကလေး(၃၂၀၀၀) ကျပ် လစဉ်ကုန်ကျလျှက်ရှိပါတယ် .. (အတိုးအလျော့လည်း ရှိနိုင်ပါတယ်) .. အကယ်၍ အလှူငွေ ပိုရခဲ့ရင် ကလေးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လစဉ် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. သို့ပါ၍ ကလေးများအတွက် ကူညီလှူဒါန်းပေးကြဖို့ ဒီနေရာကနေ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လိုက်ရပါတယ် ..
မှတ်ချက် - ကလေးများအတွက် အစားအစာ စီစဉ်ပေးရာတွင် အသားဟင်းဟု ဆိုစရာ ဘဲဥ လောက်သာ များသောအားဖြင့် ပါပါသည် ..
Labels: ကွင်းကလေး, ပန်းညိုကွင်း, မျောက်ချောကုန်း
ပညာရေးထောက်ပံ့ခြင်း အစီအစဉ်နှင့် အလှူငွေ လွှဲအပ်မှု ပ+ဒု ကြိမ် (၂၀၁၂)
ကုသိုလ်နှင့် Lotus Foundation အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ကလေးငယ်များအတွက် ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ် ပညာရေးထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်ကို ယခုနှစ် ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှ စတင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ အဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ပေးနေသော ကျောင်းများမှာ-
- ဘက သင်ချောင်း
- အ.မ.က တွဲ ကျုံစလူ
- ဘက ကျွန်းနှစ်ပင်
- အ.မ.က သင်ချောင်း
- ဘက ရုပ်ဆိုင်
- တွဲ အ.လ.က ပျဉ်းမကုန်း
- အ.မ.က မူလွန် မရဲရွာသစ်
- အ.မ.က ငြုပ်ကောင်း
- ထခွဲ အောက်လှည်းဆိပ်
- အ.လ.က (ခွဲ) ရုပ်ဆိုင်
- မော်ကျွန်း ဘ.က၊ သောင်
- အ.မ.က အထက်ချောင်း
- ဖျာပုံ၊ အဇုတ်ကြီး
- အ.မ.က အောက်ကွင်း (၂)
- အ.မ.က မူလွန် အောက်ကွင်း (၁)
- အ.မ.က စံပြ အောက်ကွင်း
- အ.မ.က မူလွန် မှော်ဘီ
- အ.မ.က ထိန်တပင်
- ပေါင်းတလည် ပြည် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကျောင်းများ တည်ရှိရာ မြို့များကတော့ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဘိုကလေး၊ မော်ကျွန်း၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံ နှင့် ပေါင်းတလည် ပြည် တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ထိုကျောင်းများရှိ မူလတန်း အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်း ကလေးစုစုပေါင်း (၅၀၄) ယောက်အတွက် အလှူငွေများကို ဇွန်လမှ စတင်ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေများကို ၂လတကြိမ် ကောက်ခံခဲ့ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ဇွန်၊ သြဂုတ်၊ အောက်တိုဘာ နှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင် ရန်ကုန်ရှိ Lotus Foundation အဖွဲ့က မောင်နှမများက သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများသို့ သွားရောက် ကူညီ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပထမအကြိမ်အဖြစ် ကလေးများအတွက် အလှူငွေကို ဇွန်/ဇူလိုင်လတွင် လွှဲပို့ပေးခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် သြဂုတ်လတွင် ထပ်မံ လွှဲပို့ပေးခဲ့ပါသည်။
အလှူရှင်စာရင်းနှင့် ကျောင်းသားစာရင်းများကို ဖြည့်စွက်သည့်အခါတွင် အချို့ ဖြည့်စွက်စရာများ ကျန်ရှိနေသေးမှုကြောင့် အလှူရှင်များထံသို့ ပေးပို့အကြောင်းကြားမှု မပြုလုပ်နိုင်သေးသည့်အတွက် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် တောင်းပန်လိုပါသည်။ စာရင်းများကို အမြန်ဆုံး အတည်ပြုပေးပြီး ပေးပို့ပေးပါမည့်အကြောင်းလည်း အသိပေးလိုပါသည်။
စာရင်းမတည်ငြိမ်ရသေးခြင်းအကြောင်းကိုလည်း အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုပါသည်။
နာဂစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၀၈ခုနှစ်မှ စ၍ အဖွဲ့မှ ကလေးများကို စတင်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။ အစဦးဆုံး စာရင်းများတွင် ကလေးများသည် မိခင်မရှိ (သို့မဟုတ်) ဖခင်မရှိ (သို့မဟုတ်) နှစ်ဦးစလုံး မရှိကြသည်က များပါသည်။ နောက်တနှစ် စာရင်းတွင် အရင်နှစ်က မိဘမရှိသော ကလေးများ၏ မိဘများ ပြန်လည် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် .. အစဦးဆုံး ထောက်ပံ့ခဲ့ချိန်တွင် ကလေးများသည် မိဘနှင့် ကွဲကွာနေပြီ မိဘများ သေဆုံးပြီဟု မှတ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း တချို့ကတော့ မိဘ ရှိသည်ဟု သိရှိပါက ထောက်ပံ့ကြေးငွေ မရရှိမှာစိုးသည့် အဖြစ်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (ကလေးများ၏ မိသားစုများသည် အတော်လေး ချို့တဲ့သည်ကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။)
နောက်ထပ် ဖြစ်တတ်သည်ကတော့ .. အစဦးဆုံးနှစ်တွင် ကလေးတယောက်သည် ဖခင်ရှိပြီး မိခင် သေဆုံးဟု စာရင်းပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်တနှစ်တွင်တော့ မိခင် ပြန်ပေါ်လာပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဖခင် နောက်အိမ်ထောင် ပြုလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတယောက် စာမေးပွဲကျခြင်း၊ ကျောင်းထွက်ခြင်းကြောင့် နောက်ကလေးတဦး အစားထိုးသည့် အခါများလည်း ရှိပါသည်။ ထိုအခါများတွင်လည်း မြန်မာပြည်ဘက်မှ ဖြည့်စွက်စာရင်းများကို စောင့်ဆိုင်းပြီး အလှူရှင်များအတွက် စာရင်းကို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက် ပေးရပါသည်။ စသည့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စာရင်းများကို နှစ်စမှစ၍ မပေးနိုင်သည်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါသည်။
တတိယအကြိမ်အဖြစ် အလှူငွေများကို စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်လောက် တွင် ပြန်လည်ကောက်ခံ ပါမည့်အကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ အောက်တိုဘလဆန်းတွင် ပေးပို့ဖို့ စီစဉ်ထားပါသည့်အကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
မေတ္တာရှင် အလှူရှင်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ ..
စိတ်ကူး အကြံဥာဏ်ကောင်းများအား ကြိုဆိုပါသည်။ kutho.blog@gmail.com
၂၀၁၄/၁၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ် စတ...